Izahay dia mamakafaka ny Sony Gold Wireless Stereo Headset 2.0 [REVIEW] | Vaovao momba ny gadget
Raha ny filalaovana no resahina, indrindra raha manararaotra ny toetra mampiavaka ny lalao multiplayer marobe isika, zava-dehibe ny hahatonga antsika hanana toe-piainana tonga lafatra. Izany no mahatonga ny ankamaroan'ny mpampiasa amin'izao fotoana izao manapa-kevitra ny hanao raha tsy misy rafitra mpandahateny ary misafidy headphone misy kalitao hanome izany rehetra azy ireo amin'ny lalao. Na izany aza, rehefa miatrika rafitra toa ny PlayStation 4 isika, miaraka amin'ny famerana ny haavon'ny fifandraisana tsy misy tariby na Bluetooth, dia mila mandanjalanja zavatra maro azo atao isika. Androany isika dia handinika ny Sony's Wireless Wireless Stereo Headset 2.0, ny heno ofisialy amin'ny PlayStation 4 izay lasa iray amin'ireo safidy mahomby indrindraeny, tsy mora vidy izy ireo.
Marina fa afaka mahita headphones amin'ny vidiny rehetra isika, eo amin'ny roapolo euro eo ho eo dia hahita headphone avy amin'ny marika toa ny Tritton isika izay hanome kalitao ampy hilalaovana sy mikrô natsangana. Na izany aza, miatrika ireo Gold Wireless Stereo Headset 2.0 izay vidiny efa ho efatra heny noho ny teo aloha isika, inona ny antony? Hodinihinay ny mahatsara sy maharatsy ary ny toetran'ireto headphone Sony ireto, izay holazainay aminao hatramin'ny voalohany fa nahagaga anay izy ireo. Andao handeha any miaraka amin'ny famerenana, ary raha tsy tianao ny mamaky dia aza hadino ny lahatsarinay.
1 Ny firafitra sy ny fitaovana fanamboarana
2 Fanamorana ny fampiasana sy fitaterana
3 Kalitaon'ny feo sy fanaingoana
4 Fifandraisana sy fampifandraisan'ny mpampiasa
5 Votoatiny sy vidiny
Ny firafitra sy ny fitaovana fanamboarana
Voalohany indrindra, ny zavatra manaitra antsika dia rehefa esorintsika ao anaty boaty izy ireo dia miatrika plastika, angamba tsy dia henjana noho izay azontsika eritreretina. Ny fehikibo dia vita amin'ny polycarbonate manontolo, mandritra izany fotoana izany, ny atin'ny fehiloha dia vita amin'ny fitaovana malefaka, spaonjy azo heverina, izay voasaron'ny fehin-kibo hoditra poli manga toa mifatotra amin'ny tapany ambony amin'ny fehikibo ihany koa.
Mikasika ny fitaovam-pandrenesana, ny ampahany mifandraika amin'ny fanaraha-maso, ny fifandraisana amin'ny famandrihana ary ny sisa amin'ny fitaovana, dia vita amin'ny fitaovana izay maka tahaka ny fingotra, izay manome fahatsapana ny fahamendrehana fa tsy manana fehikibo ary manome antoka ny fanoherana ny mandalo ny fotoana hikasika aorian'ny fikitihana ny keypad. Raha ny spaonjy ho an'ny sofina, eto dia tsy te hanota amin'ny gorodona izy ireo, manome pad ho antsika izay manome antoka ny fampiononana. Ity pad ity dia rakotra hoditra poli ihany koa, zavatra tsy fantatsika ny ho vokany rehefa mandeha ny fotoana, fa manana vintana lehibe ho singa voalohany hipoaka io raha tsy hitondrantsika azy tsara.
Fanamorana ny fampiasana sy fitaterana
Ny lohan-doha dia manana rafitra aforitra izay tsy ampoizina amin'ny fahamoran'ny fivezivezeny. Amin'ny alàlan'ny fanatanterahana herinaratra farafahakeliny amin'ny iray amin'ireo headphone dia azontsika atao ny mamoritra headphones azy ireo irery., voalohany avy amin'ny lafiny iray ary avy eo ny iray hafa, tsy misy karazana safidinao na mila manery ireo faritra plastika. Ilaina io ampahany io amin'ny fitaterana azy ireo.
Mba hitondrana azy ireo amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana iray hafa, dia hitan'i Sony fa tokony hampidirina kitapo microfiber kely hahafahantsika mampiditra ny headphones efa nopetahany teo aloha, amin'ity fomba ity, azontsika atao ny mitondra azy ireo avy aty ka tsy mila mitondra azy ireo mihantona (tena miavaka) na amin'ny boatin'izy ireo.
Ny fonon-doha sy ny sofina dia natao mba hankafizina, manana fonosana somary lehibe izy ireo ary endrika ergonomika, midika izany fa ny lavaka dia natao ho antsika hampiditra tanteraka ny sofina, amin'izay tsy ahitantsika karazana singa izay miteraka tsindry. amin'ny sofina. Ity teboka ity dia manapa-kevitra ho an'ireo mpampiasa manao solomaso, satria rehefa mampiditra ny sofina izy Tsy miteraka tsindry amin'ny tempolin'ny solomaso izany ary afaka milalao mandritra ny ora maro ianao nefa tsy manahy ny amin'ity olana ity izay tsy ampy an-telefaona hafa. Toy izany koa, ny headphones dia tsy manenjana loatra, na izany aza, ny fitokanana tanteraka amin'ny sofina dia midika fa indraindray isika dia afaka mahatsapa tsy mahazo aina noho ny hafanana.
Izy io dia toetra mampiavaka sy fampiononana izay mikrô tsy misongadina na aiza na aiza izy, tafiditra ao anaty iray amin'ireo headphone izy io, izay manakana antsika tsy hamaky azy mora foana na hanelingelina antsika rehefa milalao. Mikasika ny fizakan-tena dia hanolotra antsika manodidina ny adiny valo.
Kalitaon'ny feo sy fanaingoana
Miatrika telefaona mikasa ny hamidy ho 7.1 isika, saingy mazava fa tsy izany. Ny headphone 7.1 sasany dia misy andian-telefaona kely kokoa ao anatin'ilay iray lehibe, ary zara raha hahita headphone miaraka amin'ireo toetra ireo izahay ambanin'ny roanjato euro. Na dia izany aza Fa maninona ireo headphone ireo no manolotra feo 7.1 nefa dia kely kokoa ny vidiny? Satria i Sony mampiasa ny endri-javatra sy ny fampiharana ao amin'ny PlayStation 4 hanaterana feo 3D virtoaly izay simulate 7.1. Amin'izany fomba izany, raha vantany vao mametraka azy ireo ianao ary milalao lalao toy ny Call of Duty, dia ho hitanao fa mando be ny feo, henonao ny dian-tongotra, ny tifitra ary ny fihetsiketsehana avy amin'ny lafiny rehetra toa anao teo.
Feo ity «and»Na very ny 3D raha vantany vao mampiasa headphones ivelan'ny rafitra PlaySation 4. Amin'izay fotoana izay dia lasa headphone stereo tsara kalitao izy ireo, miaraka amin'ny fanamafisana mahaliana ao amin'ny bas ary mivoaka ny toetra mampiavaka azy, ny insulateur ivelany.
Na izany aza, Izy ireo dia headphones mazava ho azy mifantoka amin'ny filalaovana sy mankafy milalaoEny, amin'ny rafitra PlayStation 4. Mazava fa hahita headphone ianao miaraka amin'ny feo tsara kokoa amin'ny mozika amin'ny findainao amin'izany vidiny izany, saingy tsy hahita headphone ianao izay manome toetra mitovy amin'ny PlayStation 4 amin'ny vidiny mitovy, na mitovy .
Lafiny iray lehibe hafa koa ny ny fampiharana PlayStation 4. Raha vantany vao mampifandray azy ireo isika dia hanana fidirana amin'ny rindranasa miaraka amina piraofilina am-polony izay azontsika atao ao anaty fitadidiana ireo fonenantsika amin'ny alàlan'ny microUSB. Amin'izany fomba izany, azontsika atao ny manamboatra ny iray amin'ireo maodim-peo roa an-telefaona, na ho an'ny lalao fitifirana, fiara na paikady. Fampisehoana iray izay tsy misy afa-tsy ireo «headphone» ireto ihany no mahazo tombony.
Ho an'ny madinika, manolotra feo somary madio tsy misy fanelingelenana izy, na izany aza, tsara kokoa ny hamono azy io rehefa milalao irery isika, satria raha mamoaka buzz kely izay mety hanjary hanelingelina antsika raha toa ka ambany ny feontsika.
Fifandraisana sy fampifandraisan'ny mpampiasa
Tokony hohamafisinay fa na dia azonao an-tsaina an-tsary aza izany tsy manana teknolojia Bluetooth izy ireo. Izany dia hiteraka olana amin'ny fifandraisana amin'ny DualShock 4 ary fantatr'i Sony izany. Noho izany, ny fifandraisana USB dia ampidirina miaraka amin'ny headphones izay mivoaka RF, ary izy io no ho izy iray izay mifandray ho azy amin'ny headphones. Tsy ampiasaina amin'ny PlayStation 4 fotsiny izy io, fa afaka mampifandray an'ity USB ity amin'ny PC na singa audio hafa isika ary hahazo ny feo amin'ny alàlan'ny RF ao amin'ny headphone PlayStation 4.
Ny bokotra fanaraha-maso rehetra dia miorina amin'ny kaopy sofina ankavia. Amin'ity fomba ity dia hanana takelaka bokotra ahafahantsika manao laharam-pahamehana eo anelanelan'ny feon-tserasera na ny an'ny lalao video. Eo ambanin'io ambany io ihany dia mahita switch switch maodely isika, manana «OFF» hamono ny headphones, «1» ho an'ny maody mahazatra ary «2» ho an'ny maody izay efa nampidirinay ho fahatsiarovana avy amin'ilay fampiharana.
Etsy andaniny dia ahitantsika ny bokotra volon-koditra mahazatra, ambonin'ilay mety hampiasana sy hanafoanana ny virtoulization audio "VSS" 3d ary eo ambaniny ny bokotra "moana" ho an'ny mic izay ahafahantsika mangina haingana azy io.
Farany, eo amin'ny farany ambany dia misy fifandraisana jack 3,5mm fa rehefa tsy misy bateria sy fidiran'ny microUSB izahay mba hamenoana ny fampahalalana momba ny bateria sy ny rafitra.
Votoatiny sy vidiny
Ny fonosana natolotry Sony tao anatin'ireny headphone ireny dia tena tsara. Rehefa manokatra azy isika dia hahita ny headphones ary etsy ambanin'ny boaty misy ireto singa manaraka ireto: Tariby Micro USB, tariby Jack 3,5mm, kitapo USB USB ary kitapo microfiber.
Miankina amin'ny toerana ahazoantsika ny headphone dia mety miovaova ny vidiny 89 € sy 76 €, HERE Avelanay anao ny rohy Amazon mba hahafahanao mahazo azy ireo amin'ny vidiny tsara indrindra.
Izahay dia miatrika ny headphones vidin'ny kalitao tsara indrindra izay manolotra fanamboarana tanteraka ho an'ny PlayStation 4. Mazava ho azy fa aza mitady kalitao na kalitaon'ny feo hivoaka na hilalao fanatanjahan-tena fa headphones mifantoka amin'ny filalaovana sy ny rafitra resahina.
Headset Stereo Wireless Gold 2.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Izahay dia mamakafaka ny Sony Gold Wireless Stereo Headset 2.0 [REVIEW]
Salama tsara, androany vao nahazo ny headset aho ary tsy haiko ny mampifandray azy ireo. Ampiasaiko amin'ny tariby Jack izy ireo satria tsy fantatro hoe ahoana izany amin'ny Wireless.
Tsara, mbola tsy mandeha amiko io, tsy haiko raha tsy mahita ilay fitaovana mifandraika amin'ny paompy ny aroloha, mirehitra miaraka amin'ny lavitra izy nefa tsy mifandray? …. Fa ny fampiharana dia mahafantatra azy ireo saingy tsy ary mametraka ahy amiko ny zava-drehetra fa tsy re any am-peo izy ireo ...
Miala tsiny aho raha nanelingelina be ...
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny Samsung Galaxy C7 Pro vaovao